Top 3 Popular Ụzọ Back Up Google foto na vidiyo
Onye ọ bụla hụrụ a ebe ha nwere ike na-ha foto na vidiyo na a ebe mara mma na ụfọdụ oké ngwa na-enye nnọọ nke ahụ. Eleghị anya ị gị n'anya videos na foto nke ukwuu nke na ị chọrọ ebe dị nchebe maka ha? The oké ihe na Ịchekwa foto na vidiyo na otutu ebe bụ na ị na-azọpụta onwe gị nsogbu nke adịkwa ha. Nke a bụ karịsịa ikpe n'ihi na videos na foto na-anọchi anya a oge pụrụ iche na ndụ gị. Ọ ga-abụ foto na vidiyo maka agbamakwụkwọ, ọzọ, graduations, anyị na-a peek na ụfọdụ free ngwọta na ị pụrụ iji ndabere gị videos na photos.
Iji Google Photo Library
Google photos bụ a free iji usoro na ejisie photos na ebumnuche nke na-enye ọrụ na-akparaghị ókè ohere maka nchekwa. Ọ na-abịa na otutu mouthwatering atụmatụ ndị ị pụrụ iche n'echiche nke gụnyere foto edezi ike, smart ndokwa nke photos, ịtụnanya search ikike, ihe ike iji gbochie oyiri n'etiti ndị ọzọ. Google Photo Library enye a jụụ oru oma ụzọ iji chekwaa gị videos na photos. Ị ga-enwe iji wụnye Google photos ngwa na ekwentị gị ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ngwaọrụ mkpanaaka.
Ozugbo i arụnyere na ya, malite ngwa na mgbata na menu akara ngosi.
Pịa na Ntọala sochiri nkwado ndabere na mpaghara mmekọrịta.
Sapeta ndabere usoro on. Iji họrọ ihe ị chọrọ ka ndabere gị Google Photo Library, pịa na menu akara ma họrọ Photos wee họrọ Videos.
Iji Google Plus
Google gbakwunyere bụ ihe karịrị nanị a mmadụ ịkparịta ụka n'Ịntanet ngwá ọrụ na ya elu oge ị gbalịrị tapping n'ime ụfọdụ n'ime ya atụmatụ a bit ọzọ. Otu ịtụnanya mma bụ na-akparaghị ókè nchekwa ọ na-enye maka etozu foto na vidiyo. Oké mma na Google gbakwunyere ngwa bụ na akpaaka azụ elu atụmatụ ya na-enye ọrụ. Nke a bụ n'ezie ukwuu n'ihi na ndị na-ụtọ nke na-ewere foto ugboro ugboro nyere na otu onye anaghị nwere ime ntuziaka uploads. Ihe mbụ ị na-eme bụ wụnye Google gbakwunyere ngwa gị android ngwaọrụ.
Ẹkedori ngwa na-aga ntọala na na Toggle na Nchekwa onwe ndabere. I kwesịkwara họrọ size nke foto ị ga-achọ iji.
Ị ga-ahụ họrọ nchekwa ndị a ga-synced. Iji mee nke a, slide aka ekpe menu ma na-achọta On Ngwaọrụ. Ị ga-amarakwa na nchekwa na nke a na-synced ka Google gbakwunyere. Ndị na-acha anụnụ anụnụ ígwé ojii na-synced-ọ bụrụ na ị na-achọghị ka e mee ha synced enweta na ha na-eme n'aka ha na-atụgharị isi awọ.
Iji na-emebisi bandwit, ị nwekwara ike họrọ ụdị nke netwọk ị na-ahọrọ n'ihi na akpaaka backups. Gaa Ndabere foto / videos họrọ n'etiti Wi-Fi nanị na Wi-Fi ma ọ bụ mobile netwọk.
Ị nwere ike ịlele na ndị a na foto na weebụ gị version nke Google gbakwunyere nanị site na-achọ #AutoBackup na Photos Area nke Google Plus.
Iji Wondershare MobileGo
Nke a bụ software ngwá ọrụ na-enye dịgasị n'usoro nke ngwọta maka android na IOS ọrụ na otu ngwugwu. The software bụghị nanị dị ukwuu ijikwa na ekwentị gị si ọdịnaya gụnyere ejizi foto na vidiyo backups. Ọ bụ na-nnọọ mma na àjà data mgbake ọrụ, igosi dịrị na android mgbe nwekwara affording gị ohere iji mbubata na mbupụ stof. Iji jiri ngwa a ndabere gị foto na vidiyo, ị ga-mkpa na Wondershare MobileGo gị na kọmputa mbụ. Iji mee otú ahụ, ị kwesịrị ị na-aga ukara ngwaahịa na peeji na wondershare.com na bulie version na ị chọrọ ibudata dabere na PC n'elu ikpo okwu na ị na-agba ọsọ na. Mgbe echichi, ị ga-mkpa iji nweta a wondershare paspọtụ iji nweta zuru atụmatụ-ma ị nwere ike iji free atụmatụ na-enweghị na ịbanye na. Bụrụ na ị chọrọ ịbanye na dị nnọọ pịa ke n'elu nri akuku.
Ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ ndabere gị foto na vidiyo for free:
Jikọọ ekwentị mkpanaaka gị site na eriri na-enyere uka nchekwa site ịlele na Media Device (MTP). Ị ga-mkpa nwee USB debugging maka software ịchọpụta gị android ekwentị. Iji mee nke a, na-aga Ntọala ma na-achọta Mmepụta Nhọrọ.
Enweta na ya na ego na USB debugging. Nzọụkwụ aka USB debugging ga ịdị iche dabere na ekwentị gị na-eji.
Ị ga-awụnye Wondershare MobileGo ngwa na mkpanaka gị na ngwaọrụ na jikọọ na ngwaọrụ abụọ ka Wi-Fi njikọ na-ekwe ka nkwurịta okwu n'etiti ha. Ẹkedori ngwa gị na pịa
Pịa OK iṅomi QR koodu a na-egosipụta na ngwa ma ngwaọrụ abụọ ga-ejikọrọ.
Ị nwere ike ugbu ndabere gị vidiyo ma ọ bụ foto na kọmputa ma ọ bụ android ngwaọrụ. Ndabere gị foto gị kọmputa;
Bugharịa-ekpe ngalaba nke interface ma na-achọta photos mbụ wee họrọ Library ma ọ bụ Igwefoto.
Họrọ foto na ị chọrọ ka ndabere na pịa Export ka nhọrọ ọnọdụ na-ịchọrọ ị na-echekwa na faịlụ dị na kọmputa. Otu usoro nwere ike iji na nkwado ndabere na mpaghara vidiyo si na mkpanaka gị na ngwaọrụ.
Na atọ ndị a ịtụnanya ụzọ ị na-adịghị ka nchegbu banyere mgbe adịkwa foto gị mgbe ọzọ. The ịma mma bụ na ha bụ ndị free na ọ gaghị na-eri gị ihe ọ bụla na-agbalị na-ahụ nke na otu onye suut gị mma.
> Resource> Android Data Manager> Top 3 Popular Ụzọ Back Up Google foto na vidiyo